Masuuliyiinta Gobalka Jarar oo Xadhiga Kajaray Dhamaystirka Qaar Kamid ah Masharicihii Sanadkan Lagawaday Degmooyinka Gobalkaasi.‏ - Cakaara News
Masuuliyiinta Gobalka Jarar oo Xadhiga Kajaray Dhamaystirka Qaar Kamid ah Masharicihii Sanadkan Lagawaday Degmooyinka Gobalkaasi.‏
Dhagaxbuur(CN) Isniin.Jan.05.2015, masuuliiyiintan mamulka gobalka jarar oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Farxaan Cabdi Majuun ayaa kor meerka shaqo ku soo maray qaarka mid ah degmooyinka gobolka jarar ujeedada socdaalka shaqo oo ahayd in ay xadhiga ka soo jaraan qaarka mid ah mashaariicihii horumarineed ee laga waday degmooyinkaasi.
Waxaana ka mid ahaa degmooyinka ay masuuliyiintan gobolku ku soo mareen socdaalkaasi shaqo degmooyinka Yocaale, Daroor, Awaare iyo Gaashamo waxayna ukuur galayeen guud ahaan heerar kale duwan ee ay marayaan mashaariicaha kala duwan ee sanadkan ka socday degmooyinkaasi.
Masuuliyiintani gobolku waxaa sidoo kale qiimayn ku soo samaynayeen qaabka hirgalinta qorshayaashii hormarineed ee sanadkan 2007.T.I sida wakhtiga iyo tayada mashaariicaha. Mudane Farxaan Cabdi ayaa xadhiga kajaray dhamaystirka dugsi waxbarasho iyo qaarkamid ah barkadiihii laga kala waday Yocaale iyo Gaashaamo kuwaas oo ay ku baxday aduun lacageed oo kabadan saddex(3) milyan oo birr.
Gudoomiyaha gobolka Jarar Mudane Farxaan Cabdi Majuun oo wariyaha cakaaranews uga soo waramay gobolka jarar una sheegay guud ahaan mashaaricihii sanadkan lagawaday gobolka Jarar inay u socadaan sidii loogu talagalay xili dhawna la so gabagabayn doono sida uu ku soo waramayo wariyaha Cakaaranews ee gobolka Jarar. kormeer kan shaqo ee masuuliyiinta gobolka jarar ay ku soo marayeen degmooyinka gobolks Jarar ayaa waxay qayb katahay dar dargalinta mashaariicaha horumarineed.